युवतीको जिब्रोको मूल्य १३ करोड ..! | Namastepost.com
युवतीको जिब्रोको मूल्य १३ करोड ..!
RECENT NEWS January 3, 2017 nepal japan ,
क्याडबरी कम्पनीले ती युवतीको जिब्रोका लागि यति महंगो मूल्य चुकाएको हो । आखिर ती युवतीको जिब्रोमा के छ ? जसका कारण क्याडबरी कम्पनीले उनको